Baankiin biyya Turkii Ziraat Itoophiyaa keessati damee isaa banachuuf - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Baankiin biyya Turkii Ziraat Itoophiyaa keessati damee isaa banachuuf
Baankiin biyya Turkii Ziraat Itoophiyaa keessati damee isaa banachuuf
Baankiin guddichi biyya Turkii, Ziraat Baank, damee isaa Itoophiyaa keessatti banuuf deema jedhu ministerri diinagdee biyya Turkii. Yaanni Baankii Ziraat mootummaa Itoophiyaatin fudhatame argate taanaan Baankiin Ziraat Baankii biyya alaa isa jalqabaa kan miila isaa Itoophiyaa seensifatu ta’a jechuudha.
Hanga ammaatti Itoophiyaa keessa baankiin biyya alaa sochii diinagdee irratti bobba’e tokko hinjiru. Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi’uudhaan biyyattiin baankii biyya alaa simachuuf qophii miti jedhaati kan ture. Baankii Ziraatiif hayyamuuf fedhii argisiisuun maal irraa akka madde wonti beekame hinjiru.
Baankiin Ziraat baankii mootummaa biyya Turkiiti. Baankichi hojjattoota 24,000 ol qaba. Ziraat dameelee 1,700 biyya keessaa, akkasumas dameelee 57 biyyoota alaa keessaa kan qabu ta’uu isaati kan ragaaleen agarsiisan. Baankiin Ziraat Ameerikaafi biyyoota Awurooppaa heddu keessatti tajaajila laatutti jira.
Biyyi Turkii biyyoota Itoophiyaa keessatti qabeenya dhangalaasaa jiran jedhaman keessaa isii ijoodha. Dhaabbilee daldalaa 350 ol ta’antu yeroo kanatti Itoophiyaa keessa socho’utti jiru. Carraa hujii lammiilee Itoophiyaa 50,000 oliif banuu isaaniiti kan himamu. Daldalli biyyoota lamaan jidduu jiru bara 2014 keessa naannoo doolaara miliyoona 400tti shallagama.
baankii biyya alaaa
Previous articleAl Jazeera: If Ethiopia is so vibrant, why are young people leaving?
Next articleHaawwotiin hiyyummaafi qilleensa faalameef saaxilaman ijoollee IQ gad’aanaa qaban dayan, jedha qorannoon